Thunga - kulula! Ukufunda thunga
Kungenzeka uye waqaphela ngaphezu kwesikhathi esisodwa ukuthi izingubo ezintsha abahlezi sibalo aluphelele: kwezinye mabhamuza izindawo indwangu futhi Bubbles. Lokhu kubangela ukukhungatheka, ukuthi noma yiluphi uhlobo lwento ukugqoka ungafuni.
isici Enje zivame ukubavumela imfundamakhwela umthungi. Ezimweni eziningi, umshado kubonakala kwenzeka ukuthi umkhiqizo lihlukaniswe by izinqubo ekuhlanganiseni futhi wezingubo akuyena obangela umphumela wokugcina. Kwezinye izimo, isici onjalo kufihliwe kalula usebenzisa otutyuzhivaniya.
Ukuze uthole ukuthi ekuqaleni, ngokwezwi nezwi elisho ukuthi kwethemu. Thunga - ukuxhuma amabili asikiwe esebenzisa umshini wokuthunga, futhi umane - thunga nabo.
Lesi sinyathelo e inqubo lokuthunga kubaluleke kakhulu: ukungakwazi kahle ukuxhuma umkhiqizo emalungeni kuholela ukusonteka yayo. Thunga kahle - iwukuba ulungise Indwangu ezindaweni kwesokudla. Ideal into Ithungelwe esifanelana kahle sibalo, kuzosebenza kangcono ukugqoka.
Indlela ukwenza umthungo kahle
Ngisho ne ziyalingana ngokunciphisa izihloko zingaba yiphutha Sew ezivuzayo, okuyoholela ukuhlanekezela ukuma ngal. Cabanga ngesibonelo sika-imicibisholo. Uma kungenjalo ukuvilapha wezingubo ngesilinganiso nangokwesaba akuyona onqenqemeni ehambisanayo abese eyishutheka ncamashi omunye wabo priposazhena. isici Its hhayi ngibabhambabula umkhiqizo, it ngobumnene futhi azenzele yensimbi ugqoke izinto ezinjena bubble okhalweni lizovela isikhathi. A wezingubo ezinhle kulokhu rasporet tuck, ukukala futhi thunga ukuthi umkhiqizo osuphelile Uyoqeda kungenzeka ngomshado.
Indlela elula kunazo
Ngaye, sidinga intambo kanye nenaliti.
Sebenzisa nentaba ingcula usebenzisa wokulinganisa phezu umkhiqizo bese bethunga ngokucophelela. I-node ekupheleni imicu akudingeki ugoba emkhatsini, futhi, akudingekile.
Ukuze Thunga ezivuzayo kahle, qala lokuthunga ingcula kusuka engela yakhe incane ukuze ebanzi.
ukuthunga obuphelele kuyo yonke inqubo kufanele kube okufanayo. Needle punctures senze njengoba imigqa okuhleliwe.
The yaseZimbabwe zokugcina kufanele kube khona kanye onqenqemeni ingxenye, ukuze umphumela kwaba ephelele
Isinyathelo sokugcina - ukuze Thunga ke ngokushelela, ukudonsa intambo zombili imicibisholo, bese qinisa it. I umsebenzi usuphothuliwe. Tuck Stitch uhlala emshinini.
Qiniseka umcako ucacisa imikhawulo ekhosombeni bese uhlole wesimethri yabo phambi lokuthunga. Thunga ziqale onqenqemeni ububanzi futhi ngasekupheleni ukunciphisa ububanzi Stitch, ukudonsa indwangu kusukela ngaphansi unyawo presser futhi ushiye emikhawulweni obuphelele intambo 5-6 cm. Okuxhumanisa ngokucophelela nabo ifindo, hhayi nokuhudula ukuze ekhosombeni ohlangothini front wabheka bushelelezi.
Ngenxa yalokho, kwaba sobala ukuthi Thunga - ke akunzima, okubaluleke kakhulu, kahle, raschertit kanye imicibisholo ebona kulinganiswa. Ekugcineni, ungakhohlwa mayelana nemikhiqizo manzi-ukushisa ngayo.
Monge ukudla amakati: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, ukubuyekezwa
Mitsubishi Lancer 9 Izibuyekezo